100-ka magac ee adduunka ugu sarreeya sanadka ayaa lagu dhawaaqay | Abuurista khadka tooska ah
Sanadkii sagaal iyo tobnaad, Interbrand ayaa qiimeysay 100 magac ee ugu sareeya marka la eego eigenvalue-ka ay haystaan. Waa in la sheegaa in noocyadan aysan ku xirneyn mowqifkooda ku saabsan sameynta naqshadeynta astaanta, laakiin ay ku xiran tahay aqoonsiga iyo qiimaha ay ku leeyihiin adduunka.
Sannadkii hore waxay ahayd Apple, oo lagu qiimeeyo 184,154 Milyan dollar midka kaalinta koowaad galay, oo ay ku xigi doonaan Google iyo Microsoft kaalinta labaad iyo saddexaad. Waana Apple in sanadkan 2018 sii wado inay ilaaliso hoggaanka. Aynu ogaanno inta soo hartay.
Waa Google oo ku socota booska labaad iyadoo leh koritaanka 10 boqolkiiba tan iyo sanadkii hore, halka Amazon ay tahay midda ka dhacda kaalinta saddexaad shirkadda Microsoft. Shirkadda haysata nidaamka Windows-ka ku shaqeeya ayaa ku jirta kaalinta afraad.
Noocyadaas ka mid ah ee soo galay liiska 100 magacood ee ugu sarreeya hel Spotify oo leh booska 92, Subaru, soosaaraha baabuurta, oo kujira booska ugu dambeeya ama Chanel, oo dib ugu soo laabtay liiskan.
Sida Chanel, Nintendo iyo Hennessy ayaa soo laabtay liiska 100 magac ee ugu sarreeya sanadka 2018 si aad isugu daydo inaad sii joogto. Dabcan, waxaa jira noocyo kale oo shaqada laga eryay, sida Tesla, Smirnoff iyo Thomson Reuters. Sida wax la yaab leh, Facebook wuxuu ku sii jiraa booska 9, halka qiimaha calaamadiisu luminayso boqolkiiba 6. Haddaan isbarbar dhigno 6% iyo 48% uu helay sanadkii hore, waxay muujineysaa inay wax ka socdaan shirkadda Marc Zuckerberg.
Waxaan ugu dambeyntii ku dhameysanay shanta waaxood ee warshadaha leh noocyada ugu badan. Warshadaha baabuurta ayaa leh tirada ugu badan oo wadartoodu tahay 16, adeegyo maaliyadeed oo leh 12, raaxo leh 9 iyo FMCG (badeecooyin dhaqso u socda ama alaabooyin badeecad ah) oo leh 9, inkasta oo qaybta ugu badan ay korodhay ay tahay raaxo, oo leh boqolkiiba 42.
Waxaan kaaga tagnay maqaalkan xiisaha leh ee la xiriira leh waxa ka dambeeya magacyada astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Noocyada ugu sareeya ee 100 ee 2018 ayaa shaaca laga qaaday
Halkee laga raadsadaa shaqo haddii aad nafsaddaada u hurto adduunka naqshadeynta garaafka